I-oven yeParmesan ebhaka iitumato - Iiresiphi
I-oven yeParmesan ebhaka iitumato
Iitumato ezibhakiweyo kwiOveni yeParmesan sesinye sezidlo zethu esizithandayo zasehlotyeni! Iitumato zasegadini ezinencindi ezinencindi ezinencasa emnandi yeparmesan crust kwaye zibhakwe kude kube shushu. Ezi zilungile zihanjiswa ecaleni kwe-steak!
Iitumato ezibhakiweyo kwiOven yeParmesan sisidlo esinencasa esisecaleni kwisidlo sakho esilandelayo. Ayipheleli nje ekungcamla okumangalisayo, le recipe kulula kakhulu ukuyenza, ndiyazi ukuba uya kukuthanda ukuzenza kangangoko uya kukuthanda ukuzitya!
Utamatati yenye yezona zinto ziguquguqukayo kunye nemifuno emnandi (okanye iziqhamo ndiyaqikelela, kodwa ndihlala ndicinga ngazo njengemifuno). Ndiyakuthanda ukuzisebenzisa kwiiresiphi zam kangangoko ndinako. Sihlala sicinga ngeetamatato njengokongeza kwisitya esisecaleni, njengokongeza iitumato kwisaladi, esizihoyayo njengesitya sokwenyani sodwa. Bagqibelele njengoko iitumato eziqhotsiweyo , okanye wakhonza kubanda e isaladi ye-tomato kunye nekhukhamba , okanye kweli cala limnandi eliphekiweyo!
Itumato ngokuqinisekileyo yinkwenkwezi yesi sitya sisecaleni, kangangokuba isenokude igqwese ikhosi yakho ephambili! Ndiyakuthanda ukukhonza oku kunye ne-steak, nangona kunjalo kuya kuba kuhle kunye nenkukhu. Le recipe ilula kakhulu ukwenza! Sika nje utamatisi kwisiqingatha, udibanise zonke izithako, phezulu kwitumata kunye nokubhaka. Ngokukhawuleza kwaye kulula kwaye ukuba ubeka iphepha lakho lokubhaka ngesikhumba okanye i-foil, ukucoca kuncinci!
Ndihlala ndisebenzisa iimvuthuluka zesonka ezisanda kulungiswa kule recipe, kulula ukwenza. Ndibeka isilayi sesonka (okanye i-hamburger bun okanye naziphi na izonka onokuthi ube nazo kwikhawuntara) kwi-counter imbumbulu yomlingo malunga nemizuzwana emi-2-3 ukufumana iimvuthuluka zesonka ezimfumamfuma. Ngelixa idibanisa, ndithatha ibhulethi yomlingo kwaye ndiyishukumise ukuze ndiqinisekise ukuba zonke iziqwenga ezinkulu ziyadilika. Oku kusebenza nakwi-pulse kwi-blender okanye iprosesa yokutya.
Ungasebenzisa iimvuthuluka zesonka ezomileyo (okanye i-Panko) kodwa i-topping iya kuba yinto eninzi kunye ne-crunchier encinci. I-Parmesan, igalikhi kunye nemifuno oyikhethayo (ndiyayithanda i-dill, i-parsley kunye / okanye i-oregano) idibanisa i-flavour ehambelana ne-tomato kwaye ngokuqhelekileyo ziyizithako esinazo kwi-pantry yethu okanye egadini. Ngoko kulula, kumnandi kwaye akukho mgudu!
Ungasebenzisa iindidi ozithandayo zetumata kule recipe. Iitumato zeRoma okanye iitumato zecherry ziya kusebenza, nangona kunjalo ukuba ukhetha iitumata zecherry ukunciphisa ixesha lakho lokubhaka okanye ubeke nje phantsi kwe-broiler imizuzu emi-5. Nokuba yeyiphi na imeko, awufuni ukubhaka ngaphezulu kwi-oven egcadiweyo yeetumato njengoko ziya kuba yi-mushy. Ukuba uyosa ezi tumato sisidlo esisecaleni esifanelekileyo ukukhapha isidlo se-steak kwaye okushiyekileyo kushushu ngokugqibeleleyo kwisidlo sasemini!
Ngamanye amaxesha kunzima ukucinga ngemibono emitsha kunye neyonwabileyo yokutya (okanye amacala) kwintsapho yakho, ndikholelwe ukuba ndiyazi! Ukuba udidekile malunga nokuba ungakhonza ngantoni ngekhosi yakho ephambili ngobu busuku, uya kuzithanda ezi Tamati ezigcadiweyo kwiOveni yeParmesan!
5ukusuka22iivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselela5 imizuzu Ixesha Lokupheka10 imizuzu Ixesha elipheleleyoShumi elinantlanu imizuzu Iinkonzo6 iinkonzo Umbhali Holly Nilsson Iitumato ezigcadiweyo zeParmesan kwiOveni yeParmesan sesinye sezidlo zethu esizithandayo zasehlotyeni! Iitumato zasegadini ezinencindi ezinencindi ezinencasa emnandi yeparmesan crust kwaye zibhakwe kude kube shushu.
▢3 enkulu iitumato ezivuthiweyo isiqingatha
▢Nye isilayi isonka okanye ¾ ikomityi kwiimvuthuluka zesonka esitsha
▢¼ indebe itshizi yeparmesan esanda kuhlatywa
▢Nye clove igalikhi igayiwe
▢3 amacephe yemifuno emitsha (i-parsley, i-basil kunye ne-oregano (okanye i-1/2 ithisipuni nganye ye-basil eyomileyo kunye ne-dill)
▢ityuwa kunye nepepile emnyama ukunambitha
Ukusebenzisa i-blender, iprosesa yokutya okanye i-Magic Bullet, yenza isonka sibe yi-breadcrumbs entsha. (Oku kuthathe malunga nomzuzwana omnye kwiBullet yam yobugqi).
Kwisitya esincinci, hlanganisa i-breadcrumbs, ushizi, igalikhi, ioli yeoli, imifuno, ityuwa kunye nepepper. Gxuma de uxutywe kakuhle.
Beka iitumato ezisikiweyo kwisitya sokubhaka esingenzulu, ixesha ngetyuwa kunye nepepile. Phezulu kunye nomxube we-breadcrumb.
Bhaka imizuzu eyi-10-15 okanye de kube imvuthuluka zibe mdaka kancinci. Qinisekisa ukuba ungabhaki kakhulu ukuze iitumato zingabi yi-mushy.
Iikhalori:53,Iicarbohydrates:3g,Iprotheyini:Mbinig,Amafutha:3g,Amafutha aGqithisiweyo:Nyeg,ICholesterol:3mg,Isodium:72mg,Potassium:186mg,Iswekile:Nyeg,IVithamin A:1170IU,Ivithamin C:18.4mg,Ikhalsiyam:63mg,Iayini:0.7mg
Digital Scrapbooking Ukutya Kukutya Umtshato Trends Ukukhula Autism Imiboniso Yesilayidi
Zingaphi iiwathi ezisetyenziswa yindlu
yeyiphi i-rpm ekufuneka itshintshile ngokuzenzekelayo
Kukangaphi abantwana beentsana befumana iintsana
ziziphi iimpawu zomfazi wesagittarius
ukucoca iglasi eyaphukileyo